प्रदेश २ : यादव नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस र माओवादी सहभागी हुने निश्चित - नेपालबहस
प्रदेश २ : यादव नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस र माओवादी सहभागी हुने निश्चित
२५ जेठ, काठमाडौं । प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ‘उपेन्द्र यादव पक्ष’ र नेपाली कांग्रेसबीच सत्ता सहकार्यका लागि सहमति भएको छ । याे सँगै सत्ता साझेदारीका लागि दुबै दल सकारात्मक भएपनि मन्त्रालय भागवण्डा टुंगिएको छैन ।
सहमतिसँगै अब प्रदेश २ मा जसपा ‘यादव पक्ष’ नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहभागी हुने निश्चित भएको छ । आज भएको सहमति अनुसार कांग्रेसले तीन र माओवादी केन्द्रले दुई मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने भएका छन् ।
प्रदेश २ सरकारमा १० वटा मन्त्रालय रहनेछन् । त्यसमध्ये पाँचवटा मन्त्रालय जसपाले राख्ने र बाँकी पाँच वटामा तीनवटा कांग्रेस र दुईवटा माओवादी केन्द्रले लिने सहमति भएको छ ।
जसपा उपेन्द्र यादव पक्षले महन्थ ठाकुर पक्षका एकजना मन्त्री र तीनजना राज्यमन्त्रीलाई सरकारबाट निलम्बन गरेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग सत्ता सहकार्य गरेको हो ।
यो सहमतिका लागि दुवै पक्षबाट छ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । बिहान एकपटक कार्यदलको पुनः बैठक बस्नेछ भने सहमतिलाई अन्तिम रुप दिइ सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।
त्यसपछि साँझमा नवनियुक्त मन्त्रीको शपथ हुने बताइएको छ । स्रोतका अनुसार काँग्रेसबाट रामसरोज यादवको नेतृत्वमा र माओवादी केन्द्रबाट भरत साहको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने बताइएको छ । यसअघि मन्त्रालयलगायतका विषयमा काँग्रेससँग विभिन्न चरण छलछल भएपनि ठोस सहमति हुन सकेको थिएन ।
सत्तामा पुगेपछि जसपामा चुलियो कलह १ हप्ता पहिले
स्याङ्जाको दभुङठाँटीमा जीप दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु ६ मिनेट पहिले
मेलम्ची क्षेत्रमा उद्धारका लागि अखिल र युवा संघको टोली परिचालन ८ मिनेट पहिले
निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि सहज बन्दै बाँकेको जनजीवन १८ मिनेट पहिले
गण्डकी प्रदेश सरकारले शुक्रबार विश्वासको मत लिने २१ मिनेट पहिले
कुमारी बैंकको शेयरमा खरिद माग उच्च, शेयरमूल्य कति ? २८ मिनेट पहिले
उपचारको आशमा पूर्वलडाकु परियार ३४ मिनेट पहिले
नबिल बैंकको बैकिङ सेवा ४ देखि ७ गतेसम्म बन्द हुने ४० मिनेट पहिले
संक्रमणको उच्च जोखिमका कारण पनौती जात्रा स्थगित ५५ मिनेट पहिले
पहिरो खस्दा भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध २१ घण्टा पहिले
पाकिस्तानमा खोप नलगाए सिमकार्ड ब्लक गरिने ५ दिन पहिले
सप्तरीमा निर्माण शुरु गरेको शपिङ कम्प्लेक्सको काम अलपत्र २ दिन पहिले
चैते धानको उचित मूल्य नपाउँदा किसान चिन्तित ७ दिन पहिले
भियतनामको मध्य क्षेत्रमा आगलागी, ६ जनाको मृत्यु १ दिन पहिले
लाङ्टाङमा कोरोनाको प्रारम्भिक परिक्षण शुरु ६ दिन पहिले
थाई एयरफोर्सको चार्टरबाट आइपुग्यो युनिट हाइफ्लो नोजल क्यानोला २ हप्ता पहिले
संक्रमणबाट सप्तरीमा थप दुई संक्रमितको मृत्यु ३ हप्ता पहिले
निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने २ हजार ५ सय ३३ वटा सवारी नियन्त्रणमा २ हप्ता पहिले
आगलागीबाट १९ लाख बढिको क्षति ४ हप्ता पहिले
सानिमा लाइफको सभाले पारित गर्यो आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव १ हप्ता पहिले
ओलीलाई झड्का दिंदै माधव ४ हप्ता पहिले
कोरोना कहरमा गर्भवती र सुत्केरी ३ हप्ता पहिले
राष्ट्रियसभा सदस्यमा डा. खिमलाल देवकोटा विजयी ४ हप्ता पहिले
दूधमा अनुदानः उत्पादन बढाउँदै किसान ३ महिना पहिले
सडकमा भेटिएका दुई बङ्गलादेशी आज स्वदेश फिर्ता हुँदै ६ महिना पहिले
वीरगञ्जको कोरोना अस्पतालमा शंकास्पद एक बृद्धको मृत्यु ११ महिना पहिले
फर्केर हेर्दा २०७६ : आर्थिक समृद्धिको यात्रामा कोरोना सन्त्रास १ वर्ष पहिले